DAAWO SALMO Ha igu dheerayn Galmada Haddii kale………. | shumis.net
Home » galmada » DAAWO SALMO Ha igu dheerayn Galmada Haddii kale……….
DAAWO SALMO Ha igu dheerayn Galmada Haddii kale……….
Iska ilow riyadii hore ee ahayd in raaxada sariirtu dheeraato. Raaxada sariirtu ayaa waxa ay ugu fiican tahay 10-ka daqiiqo ee ugu horeeya. Arintana waxa lagu ogaaday baadhitaan cusub oo la sameeyay. Hadaba aqoonyahano maraykan ah oo ka tirsan Sex Theory and Research ayaa waxa ay baadhitaan ku sameeyeen raaxada iyo waqtiga dheer ee ay qaadankarto.
Waqtigaas oo ay raaxadu noqon karto mid dhib leh oo tartiib u dhacda ama mid dhaqso ah oo jacayl dheer ku jiro.
Title: DAAWO SALMO Ha igu dheerayn Galmada Haddii kale……….
Posted by Unknown, Published at May 17, 2016 and have 0 comments